Aniga (oo ah 15 sano jir) waxaan u diray saaxiibkey sawir aan xiranahay hoosgashi.Wuxuu tusiyay sawirka saaxiib.Saaxiibkaas wuxuu u diray sawirka dad badan oo ardayda fasalkayga ah.Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga (oo ah 14 sano jir) aad ayaan u murugaysanahay.Waxaan ka fakara waxyaabo hore.Mararka qaarkood taasi ayaa iga dhigta in aan cabsado.Mararka qaarkood ma aqaano sida aan ula sii noolaan doono.Balse waxaan ka cabsi qabaa in aan kala hadlo waalidiintayda.Yaa i caawin kara?
Next Next post: Wiilka saaxiibkayga ah oo (17) jir ah waa mid curyaan ka ah hoosta dambe. Shalay wuxuu ii sheegay in ay hooyadiisu ka xiirto timaha ku baxa hoosta aaga xubnaha taranka. Midaas oo ay sabab u tahay nadaafada uu sharciga Islaamku amrayo. Maxaa laga wadaa midaasi? Muhiim miyay tahay in loo xiiro timaha?